Askar Keenyan ah oo lagu waayay weerar Al Shabaab ku qaadeen gobolka Garissa | Banaadir Times
HomeUncategorisedAskar Keenyan ah oo lagu waayay weerar Al Shabaab ku qaadeen gobolka...
Askari ka tirsan Booliska Kenya ayaa lagu waayay mid kale waxaa kasoo gaarey dhaawac kadib markii xero lagu magacaabo rondo oo ay degaanka Faafi ee gobolka Garissa ku lahaayeen ciidanka Kenya ay weerareen xooggaga hubaysan ee Al shabaab.
Runo Bunie, taliyaha bileyska Waqooyi-Bari, ayaa u sheegay warbaahinta in iska-hori-imaadka uu socday ku dhowaad tobban daqiiqo oo uu socday dagaal toos ah.
Dablayda weerarka soo qaadey ayuu sheegay in ay tirro badnaayeen ayna ka baxseen goobta wax ka dhaceen.
Sidda laga soo xigtay Runo, askariga maqan ayaa la goobayaa, halka kan kale ee dhaawacahay ay xaaladiisu tahay mid aad u hagaagasan.
Dagaalameyaasha weerarka soo qaadey ayuu tibaaxay in ay ku hubeysanaayeen bam-baanooyin iyo garnayladda garbaha laga gano kana carareen meesha ay wax ka dhaceen kahor inta aysan soo gaarin ciidan gurmad ahaan loo diray.
“Wax kasta oo karaankeena ah waanu sameyney balse waxaanu garab uga baahanahay dadweynaha. Weerar noocaan ah ma dhici karo ka warqab la’aantooda,” ayuu ku sheegay war-saxaafadeed uu soo saarey taliyuhu.
Xilli uu ka dhawaajiyey in aysan jirin cid u soo xireen weerarka, haddana wuxuu hoosta ka xariiqay in ay howlgalo ka bilaabeen nawaaxiga goobta.
Degaanka Faafi ayaa ku dhow xuduudka Kenya iyo Soomaaliya, halkaasoo dhowaan ay Al-Shabaab ku dhaawacdey shan askari markii ay qarax la eegatay.
Kenya oo ciidamadeeda ay qeyb ka yihiin howlgalka nabad-ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa weeraro dhiig ku daatay kala kulmaya tan iyo markii ay ku biirtey howlgalkaan sanadkii 2011.
Previous articleAqroso.Xildhibaanada Gobolada Waqooyi oo soo saaray qoraal liddi ku ah Cabdi Xaashi.
Next articleCabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka digay in Jubbaland dowladdu u aqoonsato deegaan ‘cadow haysto’